September 14, 2021 - Khitalin Media
အမြိုး သမီး မြား အိမျထောငျဘကျရှေးမိပွီဆိုရငျ ရှောငျရှားသင့ျသော ယော ကြျား မြား…..
September 14, 2021 by Khitalin Media
ရည်းစားတစ်ထောင်၊ လင်ကောင်တစ်ယောက် ဆိုတဲ့ စကားပုံ ကြားဖူးပါတယ်။အမျိုးသမီးများ ရည်းစားတစ်ထောင်ထားရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းမသိသေးခင်မှာ အချစ်ကို ယုံပြီး ဘဝကို မပုံအပ်သင့်ပါဘူး။အချစ်ဦးဆိုတာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အလွန်လှပသလောက် တကယ်ညားသွားရင် သာယာတာက နည်းပါတယ်။ ဘယ်လိုယောက်ျားမျိုးကို အိမ်ထောင်ဘက်အဖြစ်ရွေးချယ်သင့်ပါသလဲဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်းမတူကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အောက်ပါအကျင့်များငြိစွန်းနေတဲ့ ယောကျ်ားများကိုတော့ အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးခဲ့ရင် ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။၁။ ကပ်စေးနှဲလွန်းတဲ့ ယောကျ်ား အရပ်စကားနဲ့ နှပ်ချေးလို့လည်းခေါ်တာကြားဖူးပါတယ်။ဒီလိုယောက်ျားမျိုးနဲ့ အတူတူ ဆိုင်မှာ တစ်ခုခုစားရင် ပိုက်ဆံပေးဖို့ လက်တွန့်တတ်တာကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သူဟာဘယ်လောက်ချမ်းသာတယ်။ ဘယ်လို Brand တွေကို ဝတ်ဆင်တယ် စသည်ဖြင့် သိသိသာသာဖြစ်ဖြစ်၊မသိမသာဖြစ်ဖြစ် ကြွားတတ်ပေမဲ့ ပိုက်ဆံရှင်းရပြီဆိုရင် မသိသလို နေတတ်တဲ့ ယောကျ်ားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးယောကျ်ား ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။ ၂- သံသယ … Read more
အသည်းနင့်နေအောင်ချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅) မျိုး….
အသည်းနင့်နေအောင်ချစ်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ (၅) မျိုး…. မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်က ခန့်မှန်းရခက် ပါတယ် ။ အကြောင်း ကတော့ စိတ်ထဲရှိတာက တစ်ခြား၊ အပြုအမူက တစ်ခြားဖြစ်နေတတ် လို့ပါ။ နောက်တစ်ခုက မိန်းကလေးတွေဟာ အရမ်းဂရိုစိုက်ခံချင်၊ အရမ်းအချစ်ခံ ချင်တဲ့ သူတွေပါ။ အဲလို ဂရုစိုက်၊ အချစ်ခံရအောင်လည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိးစား တတ်ကြ ပါတယ်ဗျာ ခုဖော်ပြပေးမှာ ကတော့ ချစ်သူ အပေါ်မှာ ဆိုးပေမယ့် တကယ်တမ်း ရင်ထဲမှာကျတော့ နင့်နေအောင်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ လက္ခဏာ(၅)မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို မိန်းကလေးမျိုးတွေက ကလေးဆန် တာလေး ကလွဲရင် သင့်အတွက် အစစအရာရာ ပြည့်စုံတဲ့ သူဖြစ်လို့ လက်လွှတ် မခံသင့် ပါဘူးနော် (၁) ဒေါသကြီးတတ်တယ်ဒီလို မိန်းကလေးတွေက … Read more
မှဲ့နဲ ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မှဲ့ တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုစီရှိပါတယ်လို ့မှဲ့ပညာရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်ခန္ဓာ ကိုယ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ မှဲ့တွေရှိနိုင်ပြီး အခုဖော်ပြမယ့်နေရာတွေမှာ ရှိတဲ့ မှဲ့တွေကတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းကိုပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့နှု တ်ခမ်း အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့ မှဲအရမ်းကို ကောင်းတဲ့မှဲ့တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရွယ်တူတန်းတူတွေ ထက်ငွေကြေးအောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိတတ်တဲ့မှဲ့လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီ လိုမှဲ့ပိုင်ရှင် တွေကေ ခါင်းနည်းနည်းမာတဲ့ သဘာဝရှိပေမဲ့ဘာပဲလုပ်လုပ်အ ရမ်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်တတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ် နှာခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ မှဲနှာခေါင်းရဲ့ တစ်ဘက်တစ်ချက်မှာ မှဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင် သေချာပေါက်ချမ်းသာမယ်ဆို တဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်ဒါ ပေမဲ့အောင်မြင်မှုနဲ ့ငွေကြေးနှစ်ခုစလုံးက အသက်၃ဝနောက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ်အိ မ်ထောင်ကျပြီးမှရရှိတတ်ပါတ ယ်ညာဘက်ပါးပြင်ပေါ်က မှဲညာဘက်ပါးပေါ်မှာထင်ရှားပြီး ပြတ်သားတိကျတဲ့ မှဲ့တစ်လုံးရှိမယ်ဆိုရင် အိမ်ထောင်ပြုပြီး နောက်မှာအရမ်းကို ချမ်းသာကြွယ်ဝလာမယ်လို့ သိနိုင်ပါတ ယ်မျက်ခုံးမျက်လုံးနှစ်ခုကြားက မှဲ့မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ဖြစ် ၊မျက်လုံးနှစ်လုံးကြားမှာဖြစ်ဖြစ်မှဲ့ တစ်လုံးရှိမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာပြီး ဘဝတစ်ခုကို … Read more
“တပတ်နှစ်ခါ ပုံမှန်လုပ်ရုံနဲ့ မျက်နှာညက်ညက်လေးဖြစ်ပြီး ဝက်ခြံကင်းလာစေမယ့်နည်း”
တပတ်နှစ်ခါ ပုံမှန်လုပ်ရုံနဲ့ မျက်နှာညက်ညက်လေးဖြစ်ပြီး ဝက်ခြံကင်းလာစေမယ့်နည်း ငွေကုန်သက်သာပြီး အိမ်မှာ အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တဲ့ မျက်နှာပေါင်းတင်နည်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ ငွေ ကုန်သက်သာပြီး အိမ်မှာ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်တယ်။ တစ်ပတ်နှစ်ခါ ပုံမှန်လုပ် မျက်နှာညက်ညက်လေး ဖြစ်ပြီး ဝက်ခြံပျောက် သွားမယ်။ မိတ်ကပ်စွဲလာမယ်။ အသားလေးက မွတ်ပြီး ပန်းရောင်သန်းလာ လိမ့်မယ် …။ Step 1 – သံလွင်ဆီနဲ့ တစ်မျက်နှာလုံး ရွဲနေအောင် လူးပြီး နှိပ်ထားပါ …။ Step2– ဆီကြောင့် ပျော်သွားတဲ့ အညစ်အကြေး မိတ်ကပ်အကြွင်းအကျန်တွေ တစ်ရှူးနဲ့ပွတ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် မျက်နှာသစ်လိုက်ပါ …။ Step3– ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူ တဇလုံလောက် တည်ထားပါ။ မျက်နှာသုတ်ပဝါလေး ခေါင်းပေါကနေ … Read more
ချွေးမလုပ်သူတွေ ယောက္ခမ သဘောကျတဲ့သူ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေသိထားရမယ်
ချွေးမလုပ်သူတွေ ယောက္ခမ သဘောကျတဲ့သူ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေသိထားရမယ် ကိုယ်နဲ့ယောက္ခမက အတူတူနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊မနေလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်မပြေလည်ကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ ခင်ပွန်းသည်ရော ကိုယ်ရောစိတ်ညစ်ရပါတယ်။ လူတွေမှာ လိုအပ်တာက အပြောချိုသာမှုပါပဲ။အပြောချိုရင် အရာအားလုံးမှာ အဆင်မပြေဘူးဆိုတာထက် ပြေလည်ကြတာကပိုများပါတယ်။ဘာပဲပြောပြော ပြေလည်တာကတော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေ့ါလေ။ ဒီတော့ဘယ်လိုစကားတွေကို အဓိကထားပြောရမလဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီး အတွက်ဝေမျှပေး လိုက်ပါတယ်။ယောက္ခမနဲ့အဆင်ပြေကြပါစေ။ ၁။မေမေက ဘယ်တော့ကြည့်ကြည့် နုပျိုလန်းဆန်းနေတာပဲဒီစကားတစ်ခွန်းက တကယ်တော့ ဘယ်သူ့ကိုပြောပြော အပြောခံရတဲ့ သူတွေက ကျေနပ် သဘောကျကြပါတယ်။ယောင်္ကျားပြောပြော မိန်းမပြောပြော အားလုံးက ကြိုက်ကြပေမဲ့၊ကိုယ့်ယောက္ခမဖြစ်သူ ကိုပြောတော့ မယ်ဆိုရင်တော့အရမ်းကြီး အကဲမပိုဖို့လိုပါတယ်။သူကဒီလိုက သက်သက်လာမြှောက်တယ်မထင်ရအောင် ပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ အမေရယ် အမေ့ကိုဘယ်တော့ကြည့်ကြည့် လန်းဆန်းနေတာပဲ။ခုနေသမီးနဲ့သွားရင် သမီးကတောင်အိုတဲ့ ရုပ်ထွက်နေတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်စိတ်ပျက်ပါတယ် ဆိုတာမျိုးလေးပေ့ါ။ ၂။ အမေ့လက်ရာက အရမ်းစားလို့ကောင်းတာပဲဒီစကားကတော့ စားဖိုမှူးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့မိလို့ သူ့ကိုဒီစကားလေးပြောပြီး ချီးကျူးပေးရင် သူလည်း သဘောကျပြီးနောက်ကိုကိုယ်လာရင်တောင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် … Read more
သင့်ချစ်သူက ဒီစကား(၅)ခွန်းထွက်ဖူးခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ်လမ်းခွဲလိုက်ပါ
သင့်ချစ်သူက ဒီစကား(၅)ခွန်းထွက်ဖူးခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ်လမ်းခွဲလိုက်ပါလူတော်တော်များများက အပြောထက်အလုပ်က အဓိက……. ကျတယ်လို့ ခံယူကြပေမယ့် အပြောကနေတစ်ဆင့် လုပ်လာမယ့်အရာတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်း…….. အမူအကျင့်စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို သူပြောတဲ့စကားတွေကနေတစ်ဆင့် သိလို့ရပါတယ် ။တကယ်လို့သင့်ချစ်သူဆီက ဒီစကား (၅)ခွန်း………. ဒါမှမဟုတ် ဒီအထဲက တစ်ခွန်းကိုပဲကြားဖူးတယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ်လမ်းခွဲလိုက်ပါတော့။ ဘယ်လိုမှလူကောင်းမဖြစ်နိုင်လို့ပါ…..။ ၁= အပိုတွေလုပ်ပြန်ပြီယောကျ်ားတစ်ယောက် ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့သင့်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ဒီလိုမစော်ကားသင့်ပါဘူး။သင်ဟာ ရက်…… တွေဆက်ပြီး စိတ်ဖိစီးနေတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သူ့ဖက်ကကြည့်လို့ အသေးအမွှားလို့ထင်ရတဲ့ ကိစ္စတွေတောင် သင့်အနေနဲ့ကြည့် ရင် အရမ်းပင်ပန်းကောင်းပင်ပန်းနေမယ်။သင့်ဘာသာသင် အပိုတွေလုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့သင့်ကို နှစ်သိမ့် ပေးရမှာ သူ့တာဝန်ပါ။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အပိုတွေလုပ်နေပြန်ပြီ ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသက်ရောက်တဲ့ စကားကိုပြောတယ်ဆိုရင်တော့…….. ဘယ်လောက်ချစ်ချစ်လမ်းခွဲလိုက်ပါ။သင့်အပေါ်မှာ နည်းနည်းလေးမှ ညှာတာ သနားစိတ်မရှိတဲ့သူကို အချိန်ကုန်ခံဆက်တွဲမနေသင့်တော့ပါဘူး…….။ ၂= နင်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်ရင်ဒီလိုစကားဟာ အစပိုင်းမှာတော့ ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရပေမယ့် သင့်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကနေ နှိပ်စက်နေ တာဖြစ်ပါတယ်။နင်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်ရင် ငါနဲ့အိပ်ပေးရမယ် … Read more
လုံးကြီး ပေါက်လှ ကိုယ်လုံးလေး ကို ပေါ်လွင် စေတဲ့ ဂါဝန်လေး နဲ့ ခမ်းနား လှပတဲ့ အိမ်အပေါ် ထပ်က ဝရန်တာမှာ ပိုစ့်ပေးနေတဲ့ အိချောပို
သရုပ်ဆောင် အိချောပိုကတော့ ဘယ်အချိန် ကြည့်ကြည့် လှနေပြီး မင်းသမီးတစ်ယောက် ရဲ့ အဆင်းနဲ့အချင်းပြည့်စုံသူပါသူမဟာ အနုပညာပျိုးခင်းရဲ့ စင်တင် မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုခေတ်မှ စလို့ ယနေ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေတိုင်အောင် ပါဝင်ရိုက်ကူ……းအောင်မြင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ပါသူမရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေ က ပီပြင်ကောင်းမွန် လွန်းလို့ ပရိသတ်ရင်ထဲ ထိမှန်စေတာလည်း ​ဖြစ်ပါတယ်သရုပ်ဆောင်ကောင်းမွန်ရုံသာမကပဲ လုံးကြီး ပေါက်လှ ကိုယ်လုံးလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အိချောပိုက ပု ရိသတို့ရဲ့ အသည်းတစ်ခြမ်းပါ မြင်သူတိုင်း ကြွေရလောက်တဲ့ အိချောပိုရဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှက မှင်သက်စေတာဖြစ်ပြီး ဖက်ရှင်တွေကလည်း လိုက်ဖက်လွန်းတာကြောင့် မိန်းကလေး အချင်းချင်းကပါ အားကျတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် သူမကို အားပေး နေကြတဲ့ ပရိသတ် တွေ အချစ်ပိုမြဲပိုနေစေဖို့အတွက် လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာ မျှဝေလေ့ရှိနေတာပါယနေ့မှာလည်း … Read more
ဘယ်လောက်ပဲ နီးနေနေ ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးနေနေ “ငါတကယ်အချစ်ခံနေရပီလား
ဘယ္ေလာက္ပဲ နီးေနေန ဘယ္ေလာက္ပဲ ေဝးေနေန “ငါတကယ္အခ်စ္ခံေနရပီလား ဘယ်လောက်ပဲ နီးနေနေ ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးနေနေ “ငါ တကယ် အချစ်ခံနေ ရတယ်” ဆိုတဲ့ ခံ စားမှု မျိုးလေး ရ ရှိနေ ဖို့တော့ တကယ် လို အပ် ပါတယ် အချိန်မှန် စာပို့ ဖုန်းတွေပြောနေ။ တာထက် အများကြီ းပိုတယ်နေကောင်းအောင်နေ ထမင်း မျ ားများစား ဆို တဲ့ အမှာ စကားတွေ ထက် အများကြီး ပိုတယ် Goodnight အိပ် မက်လှ လှမက် ပါစေ ဆိုတဲ့ Message ထက် လည်း။ အများကြီး ပိုပါ တယ် ကိုယ့်အပေါ် သက်ရောက် လာတဲ့ … Read more